5 Words vs. 5 Lainga — Trip LEE - OFISIALY SITE
5 Words vs. 5 Lainga
Ny fomba mamaly ny hafatra dia miankina amin'ny hoe iza izany avy. Mamelà ahy ianareo hanome ohatra anareo. Raha misy olon-kafa mandeha miakatra atỳ amiko eny an-dalana ary milaza, "Aoka aho mindrana ny fanalahidin 'ny fiara tena haingana. Te-hahazo vola avy amin'ny glove boaty,"Angamba aho nijery azy tahaka ny adala izy, ary mandeha eny. Fa raha ny vadiko dia hiakatra ho ao amin'i ahy ka milaza izany koa, Aho hanome azy ny fanalahidy faharoa tsy misy eritreritra. Isika hihaino sy hamaly hafa miankina amin'ny hoe iza no miteny.
Ahoana no tokony ho tranga iray fanampiny. Raha misy ny namana tsara Nanizingizina fa tsy maintsy manaiky ny fahefana tanteraka ny fiainako manontolo, Angamba aho nijery azy tahaka ny adala izy, ka mandehana hahazo namana vaovao. Ary ho tsara ho ahy ny hamaly izany. Ahoana anefa raha Andriamanitra Izao-mihitsy hoe: toy izany koa ny tena?
2 Timothy 3:16 hoy i, "Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra." Izany no tsy ny rehetra andininy, fa ireo milaza teny dimy ampy misaintsaina ho androm-piainany. Ny zava-misy fa ny teny ao amin'ny Soratra Masina dia ny tenin 'Andriamanitra Izao-mihitsy no manan-danja. Ary mihevitra aho fa ireo teny dimy, "Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra,"Manampy antsika hiady ny sasany amin'ireo lainga izay mino isika indraindray momba ny Baiboly. Te-hijery dimy.
1. Satria Soratra Masina dia Andriamanitra-olo-miaina fa tsy: Opinion
Maro amintsika no hitondra ny Baiboly, toy ny boky feno ny soso-kevitra, na ny famoriam-bola ny hendry teny. Mety ho tsara ny hitondra ny Baiboly izany, raha izany fotsiny boky ny teny notsongaina fa nisy olona nivory. Afaka mamadibadika sy manasongadina ny faritra tiantsika. Fa tsy.
Andriamanitra manana fahefana ny zava-manan'aina rehetra, ary rehefa manome didy, ry zareo tsy soso-kevitra fotsiny. Tsy hevitra ry zareo afaka misafidy na na ny tsy misoratra. Andriamanitra dia tsy manana "hevitra." Izy Andriamanitra. Na inona na inona izy dia mihevitra ny fahamarinana.
2. Satria Soratra Masina dia Andriamanitra-olo-miaina fa tsy: lany andro
Maro ny olona amin'izao fotoana izao miresaka momba ny Baiboly, toy ny antitra antitra boky amin'ny fomba fijery izay ilaintsika mba hahazoana lasa. Ho azy ireo, fa matetika manafintohina sy amin'ny toe-javatra sasany downright ratsy fitondran-tena. Ny hafa indray milaza, "Tena antitra - mahazo izay azonao atao avy izany, fa aza maka izany ho zava-dehibe loatra. "
Ny marina tsy faty. Andriamanitra tsy mba olona no voasariky ny toerana ara-kolontsaina sasany. Andriamanitra dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ny Baiboly dia efa antitra ary voasoratra ao amin'ny kolontsaina samy hafa, fa ny fahamarinana rehetra dia toy ny marina amin'izao andro izao. Koa ny asa dia tsy ny tsy miraharaha ny zavatra izay tsy "hifanaraka antsika", na izay tsy mifanaraka ny zavatra eritreretintsika dia fitondran-tena. Ny asa dia ny mamaky izay nanao hoe:, namantatra ny dikan'izany ho antsika, ary manaiky azy io.
3. Satria Soratra Masina dia Andriamanitra-olo-miaina fa tsy: Just Information
Ny sasany amintsika toy ny teolojia ho amin'ny ratsy ny antony. Isika handeha amin'ny Soratra Masina mba hahafahantsika hianatra sy hahatsapa zavatra lalina. Rehefa mamaky ny Soratra Masina fa tsy tantara fotsiny boky, na fotsiny ny boky ny fahendrena, na fotsiny ny boky ny tantara. Izany dia ireo zavatra, fa tsy marina ireo zavatra. Rehefa mipetraka amin'ny Teny, ianao dia mivory amin 'Andriamanitra. Tsy mamaky ny Tenin'Andriamanitra raha tsy izany ny zava-misy amin'ny lohalaharana ny saina. Andriamanitra miteny. Henoy.
4. Satria Soratra Masina dia Andriamanitra-olo-miaina fa tsy: mankaleo
Mihevitra aho fa izany no mety ho fahotana fomba fijery fa isika rehetra no meloka ny amin'ny fotoana iray. Tsy te-hamaky ny Baiboly, satria tsy tena hihazona antsika. Tsy mitana ny saintsika. Fotsiny aho hoe zavatra iray: Ahoana no tokony ho mankaleo ny mahita an'Andriamanitra!? Izany porofo ny mpanota ny tsimon'ny tsiro. Izany dia maneho fa tiany isika ho an'ny rehetra ny zava-diso.
Aoka ny mibebaka amin 'izay, matoky Kristy, ary hanararaotra ny tombontsoa mba hihaona amin'Andriamanitra.
5. Satria Soratra Masina dia Andriamanitra-olo-miaina fa tsy: malemy Ara-panahy
Ny Tenin'Andriamanitra dia mahery. Izany dia miaraka amin'ny teniny izay namorona an'izao rehetra izao. Hoy izy, “Aoka misy,” ary nisy. Ary Jesosy,, Andriamanitra ny Zanaka, tonga tany an-tany ny herin 'ny teniny no eo amin'ny fampisehoana feno. Rehefa niteny demonia cowered, rivotra sy ny onja nisintona, aretina nandositra, ary ny maty ny olona dia niverina ho amin'ny fiainana. Ny Tenin'Andriamanitra dia tsy hay saintsainina, mahery vaika.
Izany ny Tenin'Andriamanitra fa ny avy amintsika afaka ny ho voavonjy. Andriamanitra mahery dia mampiasa ny Teniny mba hamaky an-mangatsiaka maty fo ka omeo maso mba hahita an'i Jesosy, Izay natsangana tamin'ny maty ny Tenin'Andriamanitra. Ary izany io teny izany koa fa Andriamanitra dia manohy manambara ny momba Azy ho antsika.
Ny boky izay mbola tsy mipetraka eo amin'ny talantalana dia ny Tenin'Andriamanitra 'Andriamanitra Tsitoha. Izany masina, masina, marina, ary tsy hay saintsainina, mahery vaika.
Rehefa miteny Andriamanitra Izao-mihitsy dia tokony hanova ny fomba mihaino.
KdMeads • Septambra 5, 2013 amin'ny 11:32 aho • navalin'i
Awesome! Mila bebe kokoa!
Latisha • Septambra 5, 2013 amin'ny 11:34 aho • navalin'i
Tena tia namaky izany dia nanampy ahy mihoatra noho fantatrao. Thanks❤
Clarence • Septambra 5, 2013 amin'ny 11:38 aho • navalin'i
Ity lahatsoratra ity dia tena mampihetsi-po. Nanao ahy hahatsapa ny hasarobidin'ny Andriamanitra teny sy ny fomba hampiharana eo amin'ny fiainako isan'andro. Ataovy hatrany ny asa tsara dia napetrany teo amin'ny fiainanao Trip!!!
Tee • Septambra 5, 2013 amin'ny 11:44 aho • navalin'i
Andriakaky ô! Ny teboka faharoa izany mihitsy ny Tompo dia nanompo tamiko momba izany tolakandro.. Miderà an'Andriamanitra noho ny fanambarana bebe kokoa! Ity no lahatsoratra lehibe mety ny anaran'i Jehovah mampiseho ny voninahitro..
Rosalinda • Septambra 5, 2013 amin'ny 11:53 aho • navalin'i
Io no tena mamelombelona ny zavatra efa namaky mandritra ny andro. Thnx noho ny maha-fahazavana eo amin'izao tontolo izao, ary nanome voninahitra an'Andriamanitra!!
Shauneil • Septambra 5, 2013 amin'ny 12:08 PM • navalin'i
Perfect fanoritsoritana ny tenin'Andriamanitra sy ny fomba mihatra amin 'ny fiainantsika.
Jerome • Septambra 5, 2013 amin'ny 1:56 PM • navalin'i
BoomSauce! Tiako be izany Rahalahy! Tena mety sy tena mazava tsara nanambara… The “Soratra Masina rehetra”
Tony kachule • Septambra 5, 2013 amin'ny 2:08 PM • navalin'i
Manana heviny be mahazo ny zavatra U efa nilaza,ho an'Andriamanitra anie ny voninahitra,ny dia hilaza bebe kokoa!!
miresaka momba: 5 Words vs 5 Lainga …ny Trip Lee | Rahalahy. Jerome
Athenkosi Nogcinisa • Septambra 5, 2013 amin'ny 2:12 PM • navalin'i
Ry Trip Lee
Ireo teny ireo Tena niteny tamiko, satria fotsiny aloha teo aho nijery ny Baiboliko, “izany antitra” ary “Aho no Mila tena mamaky azy io?”.Ity bilaogy Tena nanova ny fomba mihevitra ny bible.God hitahy anao ary Misaotra
kebron • Septambra 5, 2013 amin'ny 2:40 PM • navalin'i
awesome! Tena nitahy ahy ity. Misaotra noho ny doin izay U atao :)
CodyMcCracken • Septambra 5, 2013 amin'ny 4:08 PM • navalin'i
Izany no fahamarinana ary mamely ny toerana!! Mila hafatra rehetra izay dingana eo amin'ny rantsan-tongotra.
Joel • Septambra 5, 2013 amin'ny 5:13 PM • navalin'i
Mitovy amin'ny 19 yr lehilahy antitra, Tsapako toy ny U mifandray amin'ny ny taranaka.
Te hilaza fotsiny, I Mankasitraka ny zavatra Ora manao.. ary Ora hany bandy izay hahafahako mihaino mitory ny 1hr tsy blinking! I te-hihaino bebe kokoa Ora toriteny niakatra tamin'ny toerana ity PLZ!
Debbie • Septambra 5, 2013 amin'ny 9:46 PM • navalin'i
Jessica • Septambra 5, 2013 amin'ny 9:48 PM • navalin'i
Amen! Dia ny tena no tena tia ity bolongana ity! misaotra betsaka anao ho malina, ary izany teny mampahery! :-)
CherishJesusLuv • Septambra 5, 2013 amin'ny 11:33 PM • navalin'i
Ity Blog foana vao hahazo tsara kokoa.
Ny Baiboly dia tsy eo amin'ny talantalana Ezekiela aho 24. Mamaky mahitsy aho nanipy. Ary izaho anefa dia tsy mbola namaky na inona na inona toy izao….Ny fomba mamaritra Jerosalema no adala. Aho dia afaka ny hanana ny fanaintainana nanipy toko io rehefa miresaka momba izany Fitsarana.
Limon • Desambra 9, 2014 amin'ny 11:08 aho • navalin'i
Wow Tsy maintsy miaiky ianao manao ny sasany tena treanhnct hevitra.
ReneeB • Septambra 6, 2013 amin'ny 9:00 aho • navalin'i
Marina?! Izany no awesome!!! Aza mihevitra ve ianao manao ampy na tsy nanao hoe: ampy amin'ny ny fiainanao.. Tsarovy fotsiny ny zavatra nitondra anareo avy, ary avy hatrany ianao mahita ny zavatra nataony, ary manao.. Izy no mampiasa anao izany kery!!! Misaotra amin'ny zavatra rehetra ataonao, dia manome fanantenana!!!!!!
Omario. • Septambra 6, 2013 amin'ny 1:53 PM • navalin'i
Aoka ny teny rehetra, hampiasaina ary nisaintsaina teo amin'ny fahasahiana sy fahavononana,
Dia tonga Zanaka sy ny heriny dia tsy azo haseho eo amintsika amin'ny alalan'ny Fanahy Masina an'i Jesoa Kristy Name.
ollilovely • Septambra 6, 2013 amin'ny 2:12 PM • navalin'i
Misaotra mizara ireo teny ireo ny fahendrena! Mampahatsiahy ahy fa ny teny fikasana dia tsy mahatsapa-tsara teny na manentana ny fanahy sy mampahery teny nalaina… izy ireo dia bebe kokoa…ry zareo ny fahamarinana eo amin 'ny fiainantsika. #Tiako izy izany!
Miderà ny Tompo noho ny fahendreny sy ny fitiavany tsy manam-petra nanao hita alalan'ny Teny masina. Ary misaotra anareo noho ny fahatsapana ny Fanahiny. Manantena aho fa ny zavakanto dia hahatratra ny olona indray andro any ny fomba ny anao no! foana mitory, Rahalahy!
miresaka momba: Countdown- Day 9: Ny fampanantenany dia Real! | ollilovely
Wayne Miller • Septambra 6, 2013 amin'ny 6:34 PM • navalin'i
Misaotra an'Andriamanitra aho noho ny fanosorana izay toerana eo amin'ny fiainanao ry tia ny bilaogy, ary manantena ny mamaky bebe kokoa. Andriamanitra no tena nitahy ny fahendrena anananao
Terran • Septambra 6, 2013 amin'ny 11:47 PM • navalin'i
Trip, izay zavatra Heveriko fa isika rehetra miaraka amin'ny fifanarahana fa afo indrindra rehefa maty any. Hitako ny sasany izay mahita boky nosoratan'ny mpanoratra hafa manome ny fomba fijeriny ny soratra masina fa manadino fa ny Baiboly no Andriamanitra aina. Hatrany haka ny Baiboly ho toy ny fahefana ambony!
miresaka momba: Sabotsy Manaova horakora-outs: Kansas City, Pine Bluff, & fanompoana Links | H.B. Charles Jr.
JosephBonacci • Septambra 7, 2013 amin'ny 12:15 PM • navalin'i
Beautiful. Andriamanitra’ Tsy miova mihitsy teny. Toy izany koa amin'izao andro izao toy ny tamin'ny an'arivony taona maro lasa izay, ary mbola ho marina an'arivony taona manomboka izao. Ralehilahy dia tia ny manova, fiovana, diso fandray ny, ary fitantanana azy noho ny fikasany. Vakio izany, mianatra azy io, miaina izany. Aoka ianao ho mpankatò ny teny. Identityfulfilled.com
Altruism • Septambra 9, 2013 amin'ny 7:06 aho • navalin'i
Nahoana ny Baiboly fa tsy ny CORAN / Bhagavad Gita / Talmoda / sns.?
Shelby • Septambra 10, 2013 amin'ny 1:54 aho • navalin'i
Tsy afaka manazava aho hoe tena nila izany, ary tena velom-pankasitrahana aho fa nihaino ny feony toy ity hafatra ity dia ho voasoratra. Misaotra anao!
David Williams • Septambra 11, 2013 amin'ny 1:15 aho • navalin'i
Walker • Septambra 11, 2013 amin'ny 10:55 aho • navalin'i
“mpanota tastebuds,” Tiako fa. Tena marina izany. I tonga any amin'ny Teny ka ho lavo matory. Izany no mahatahotra. Mila mibebaka sy mangataka amin'Andriamanitra mba hanokatra ny masoko sy ny fahafaham-po ahy, toy ny mpanao salamo. Foana ny fanoratana sy ny fanompoana Trip, izany zavatra tsara. Tena nampahery ary nidina tetỳ an-tany.
Chelsea • Septambra 26, 2013 amin'ny 8:56 aho • navalin'i
WOW. Tsirairay ao anatin 'ireo hevitra ireo marina eo, ary nanome ahy fomba fijery vaovao momba ny Baiboly. Misaotra noho ny miteny ny marina 'Andriamanitra. Izany dia midika hoe toughing ny fiainan'ny maro.
Victoria • Oktobra 26, 2013 amin'ny 7:37 PM • navalin'i
Izao no nilaiko ,
miresaka momba: 5 hevitra (diso) ny Tenin'Andriamanitra | I mianatra ny Baiboly